मेरो अङ्गालोमा बाँधिन पुगिन् - प्रभात खबर
मेरो अङ्गालोमा बाँधिन पुगिन्
प्रभात खबर ३० माघ २०७७, शुक्रबार १९:०९ मा प्रकाशित
इटहरी , माघ ३० ।
क्याम्पसकाे राेडमा मलाई पर्खेर बसेकी थिईन । मलाई हेरेर निकै उत्साहित भईन, यस्ताे लाग्थ्याे कि वर्षाै देखि अाउन बाकी कुनै यात्रीलाई कुरिरहेकी जस्तो ।
म नजिक पुग्ना साथ मेराे हात समाई अनि चुम्बन गरिन । अनि भनिन बाबा ह्याप्पी हग डे ! अाज निकै खुशी छाै त ,के कुरा हाे विषेश?भनी सोधे जवाफमा मात्र केही हैन आयो तर फेरि बोलिन हिजाे हजुरअामाले बिहेकाे बारेमा कुरा गर्दैहुनुहुन्थ्याे, तपाईंको प्रशंसा गर्दैहुन्थ्याे नि बाबा । ला‌ै यति खुशिमा हातमा मात्रै किस गरेकी बादरनी अंगालाे हाल्नु पर्दैन भनेर गिज्याईदिए ।
अाज धरान रुम जाउन भनिन, मैले हासेर गाला सुम्सुमाएर क्याम्पस तिर जाउ भनेर ईसारा गरे । उनले खाजा खाने मन गर्दै एक ठाउँ थुक्पा मागईन । हामीले संगै खायाै, उनी कक्षामा पसिन म भने अाफ्नाे साथीहरू संग गफमा व्यस्त भए ।
उनकाे कक्षा सकेपछि बाहिर अाईन ,तर झाेला नलिकन । मैले घर जाउ भने उनले झाेला त क्लासमै छ बाबा भनिन ,लिएर अाउ भन्दा तपाईं पनि हिन्नुन भन्दै तानिन ,म पनि उनकाे पछि पछि गए । उनकाे कक्षामा काेहि पनि थिएन ,उनलाई बाेलाए , सानी ! उनी म तिर फर्किन । मैले झट्ट नजिक गएर अाेठमा किस गरिदिए, अनि अंगालाे हालेर भने, ह्याप्पी हग डे माई हार्ट ! उनकाे हाेस उड्याे । अावाक भईन , दुवै हातले मुहार छाेपिन । उनकाे श्वास अनि ढुकढुकी बढिरहेको थियाे , उनी कापिरहेकी थिईन । पहिलाे पटक म डराए बाबा ! मैले कल्पना नै गरेकाे थिईन । मेराे जीवनकाे कहिल्यै नभुलिने उपहार र खुशी दिनु भयाे । मेराे हत्केलामा हात राख्दै भनिन संसार यताकाे उता हाेस बाबा, म मरेर पनि तपाईंको साथ छाेड्ने छैन ।
अाेइ पागल के के बाेल्छेस, तलाई डर लाग्दैन?
लाग्छ नि बाबा , त्यैभएर त कतै तपाईंलाई मबाट खाेसेर लगिदिन्छ कि जस्ताे लाग्छ । यति धेरै माया गर्नुहुन्छ अरुले त्यहीँ माया पाउन तपाईलाई चाेर्न पनि सक्छन् ।
धत् लाटी केही हुन्न क्या म तिमी संगै छु त।
यति भन्दा सम्म उनकाे साथीहरू अाई पुगे,उनले हामी गयाै भन्दै निस्किन लागिन । उनकाे साथीले तिमीहरुकाे हग डे बबाल हाेस है भन्दै जिस्काउन थाले,अनि उनि लजाउदै मलाई तान्दै त्यहा बाट निस्कन् लागिम ।
रुमकाे साचाे छ ब्यागमा? साेधे , हिजै हालेकाे थिए भनिन । त्यसाे भए सिधै धरान जाअाै अब ,घरमा भन अाउदिन भन्दा हुन्छ । उनी हस भनि सहमती जनाएर मेरो अङ्गालोमा बाँधिन पुगिन्, अनि हामी त्यहाँ बाट निस्कियाै ।